Hiil Hooyo - Af-soomaali
Ujeedadu waxeey tahay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo wanaagsanaada iyo howlaha la talinta dhalmada
Soomaaliya iyo Geeska Afrika waa wadamada ugu hallista badan ee lagu dhalo. Si kastaba ha ahaatee xaalada iyo caafimaadka hooyooyinka waa la horumarin kartaa iyado la horumarinayo adeegyada caafimaadka ee haweenka uurka leh iyo kuwa umulay iyo tayadooda.
>> Iskaashiga Horumarinta
>> Mashruuca Sahasaho
>> Mashruuca Ramaad
>> Mashruuca Hiil Hooyo
>> Mashruuca Rajo
Soomaaliya iyo Geeska Afrika adeegyada caafimaadka hooyada ayaa ah kuwo liita tayo ahaan iyo kheyraad ahaanba.sidoo kale malehelayo caawinaad xaga xirfada dhalmada gaar ahaan meelaha fog fog.
Qiyaas eey soo saartay unicef ayaa lagu sheegay in meelaha aan ka wadno mashaariicda ee Somaliland iyo Puntland in ku dhow boqolkiiba 60 hooyooyinka eey dhalaan ayadoon la helin caawimaad xirfada dhalmada.
Waxyaabaha ugu saameen badan waxaa kamid ah dabeecadaha laga shakiyo ee ku saabsan la socoshada xaalada uurka ama ku dhalida xarunta caafimadka iyo isbitaalka.
Dhimashada dhallaanka ayaa ah mid aad u sareysa oo ugu badnaan tdobadii caruur ahba mid ayaa dhinta kahor shan maalin dhalashadooda. Boqlkii kuna 700 oo kamida hooyooyinka ayaa dhinta.
Sidoo kale abaaraha, cuno yarida, iyo biyo nadiif la aanta goobaha nadaafada iyo adeegyada caafimaadka guud oo yar ayaa ka dhigaya nolosha dumarka mid adag.
Dhmashada sare ee hooyada waxeey xiriir dhow la leedahay caqabado kale oo badan oo xaga horumarka ah. Dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa nafsiyadeed ee soo foodsaaray qoyska ka sokow, gabdhaha waayay hooyooyinkooda waxeey u badantahay ineey yihin kuwa aan wax baran oo guursada iyaga oo yar.
Sababaha ugu waaweyn ee dhimashada hooyada waxaa sababa dhibaatooyinka cudur ee xiliga uurka iyo dhalmada.taas oo looga hortagi lahaa korumeer ku filan iyo daryeel caafimaad oo tayo leh.
Sidoo kale cudurada caruurnimada sida, shubanka, dhiig yaraanta iyo nafaqo xumada, si ku filan looma daweyn.
Wax barasho si loo yareeyo dhimashada hooyada iyo caruurta
Mashruucan ayaa looga golleeyahay in lagu yareeyo dhimashada sare ee hooyada iyo dhallaanka isla markaana kor loogu qaado xuquuda aadanaha iyadoo la hagaajinaayo caafimaadka hooyada iyo haweenka iyo helitaanka caafimaad daryeel adka naafada ah.
Shaqaalaha caafimaadka waxaa la siinayaa waxbarasho tababar oo ku saabsan dhallaanka.
Wada shaqeenta jaamcadaha finnishka waxaa la sameeya cashir khdaka ah oo dhameestiran kuna saabda dhalaanka hooyada oo loo fidiyay ardayda 3 jaamacadood oo maxalli ah.
Mowduucyada la baranayo waxaa kamid ah caafimaadka int alagu guda jro uurka, aqoonsiga halista ku jirta uurka, si looga hartago gudniinka dumarka nuujitaanka, korinta ilmahai yo xaquuqda loo simanyahay ee hooyooyinka iyo caruurta naafada ah cashiro ku sabsan.
Ujeedadu waa in xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka xirfadooda iyo dhiirigelintooda la hagaajiyo iyo fahamka ahmiyada eey leedahay umusha iyo in lala socdo umusha kadib .iyo muhiimada eey leedahay xirfadle tababaran xaga dhalmada eh ayaa sii kordheysa.
Mahruucu inta uu socdo waxaa sidoo kale la hagaajinayaa xarumaha daryeelka hooyada iyo agabkooda maadaama eey aad ugu yaryihiin meelaha mashruuaca laga fulinayo.
Natiijooyinka shaqadeena inta lagu guda jiray 2017-2020 ee mashruuca Hiil Hooyo
225 shaqaale ka shaqeeya xarumaha hooyada iyo dhallaanka ayaa qaatay wax barasho buuxin ah.
3 Jaamacadood oo ku yaala geeska afrika ayaa ardayda kalkaaloosooyinka iyo umalasooyinka u fidiyay koorso 15 caredit ah oo barashada khadka ah koorsadaas oo lagu soo saaray iskashi eey la sameeyeen jaamacadaha Finland ee DIAK iyo XAMK.
134 Arday oo kalkaaliyaal iyo umulisooyin eh ayaa dhigtay koorso qadka ah oo horumarsan.
Macluumaad ku saabsan caafimaadka ooyada iyo dhalaanka muuhimada eey leedahay iyo la socoshada uurka ayaa lagu kordhiyey oleleyaasha raadiyaha telefeshinka iyo boorarka. Olooluhu waxeey gaareen wadar ahaan in ka badan hal milyan oo qof.
6800 oo ah ardayda dugsiyada hoose ayaa helay macluumaad ku saabsan nadaafada galmada iyo caafimaadka taranka.
Kaalinta dadka naafada eh ee adeegyada caafimaadka waa la hagaajiyay oo eey ku jiraan xuquuqda daka naafada eh iyo baahiyahooda ayadoo qeeb ka ah tababar la siinayao shaqaalaha xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka iyo koorso qadka ah oo loogu tala galay ardayda.
Waxaa la hagaajiyay xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka iyada oo loo dhisayo jaranjarooyin iyo kuraas cuuryaamiinta oo loo qeebiayay lix xaruumo caafimaad.
Tababar loogu tala galay xirfadlayshaasha daryeelka caaafimaadka iyo ardayda daryeelka caafimaadka. Waxaan kordhineynaa fahamka bulshada ee caafimaadka hooyada iyo xaquuqda loo simanyahay ee haweenka iyo caruurta naafada ah iyada oo loo marayo ololeyaal macluumaad.
Somaliland iyo Puntland.
Mashruucu waxa uu bilaabmay horraantii 2017 wuxuuna socon doonaa ilaa dhammaadka 2022.
Yaa loogu tala galay?
Mashruuca waxaa ka faa ii deysan doona dhammaan bulshada kunool aaga mashruuca oo eey ku jiraan 100 000 oo haween ah oo ku jira dada dhalmada ama haweenka uurka leh laa 1000 qof oo naafo eh iyo qoysaskooda ayaa taageero helaya.
Yaa lala sameynayaa?
Shabakada fnnishka iyo somalida ayaa isku dubariyada mashruuca sidoo kalw waxaa qeeb ka ah sadex ngo oo finnish ah Puntland Society of Finland (PSF), Sahan International Relief Association (Sahan), Somaliland Seura (SLS) iyo sedex urur oo is kaashi maxalli ah Dumar, Aayatiin Development Foundation (Aayatiin) iyo Hope Org.
Intaa waxaa dheer labo dugsiyada sare ee xirda ee Finland Diak UAS iyo XAMK UAS.
Iyo sadex jaamacadood oo maxalli ah Jaamcada Bariga Afrika, Jaamacada Nugaal iyo Jaamacada Camuud.
Ururka iskaashiga naafada (Disability Partnership Finland) waxa uu mashruuca uga qeeb qaadanayaa sida khabiir dhanka haweenka iyo caruurta naafada ah xaquuqdooda in la dareemo.